Home Wararka RW Kheyre oo maanta ka baaqday xafladii la dagaalanka musuq-maasuqa. Maxuu ka...
RW Kheyre oo maanta ka baaqday xafladii la dagaalanka musuq-maasuqa. Maxuu ka baqay?
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo maanta ku casuunaa in uu ka qayb-galo kana hadlo kulankii lagu xusaayay maalinta ka hortaga musuq-maasuqa ayaa ka baaqday xafaladda isaga oo aan bixin wax sabab ah.
Kulanka oo ay ku sugnaayeen wariyayaal caalamka ka socda iyo dublamaasiyiin shisheeye ayaa waxa uu RW Kheyre ka baqay in wax laga waydiiyo musuqa baahay ee uu faraha kula jiro, gaar ahaan lacagaha lagu eedeyay in laga dhacay qasnada dowlada oo ay dacawdeeda hada ka socoto Baarlamaanka.
Waxaa isa soo taraya dareenka ay shacabka ka qabaan xukumaada Kheyre taas oo noqotay xukumadii ugu musuqa badnayd ee Soomaaliya so marta
Previous articleSafiirka Maraykanka Yamamoto oo Farmaajo ugu yeeray Xarunta Xalane
Next article(Deg Deg) Maxaa lagu gorfeeyay kulankii qado ee RW Kheyre iyo Gud. Maxamed Mursal (Wax ka oogt)
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya oo maanta xukun ridday
ONLF oo bogaadisay go’aanka xukuumadda Soomaaliya
Maanta Somalida Waddaniyiinta ah waa Faraxsan yihiin Somalidiidna Asaay ayaa u Saarantay.
DEG_DEG: Saadaq John oo caawa dhalinyaro guryahooda kala baxay iyo Farmaajo...
Dagaal Beeleed ka socda Gobolka Hiiraan & DF oo dhagaha ka...